Dutchtown ကော်မတီများ• DutchtownSTL.org •ဒတ်ခ်ျတောင်း၊ စိန့်လူးဝစ္စ၊ MO
ဒတ်ခ်ျတောင်းအဖွဲ့အစည်းများသည်ရပ်ကွက်အတွင်းလူထုအသိုင်းအဝိုင်းမှတိုးတက်မှုအတွက်ကော်မတီပုံစံကိုတည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။ Dutchtown ကော်မတီများစီမံကိန်းသည်ပူးတွဲကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် Dutchtown ပင်မလမ်းများ, အ Dutchtown ရပ်ရွာတိုးတက်မှုခရိုင်, ပြီးနောက် စိန့်လူးဝစ်ပင်မလမ်းများပဏာမခြေလှမ်း.
အချို့သော ပရောဂျက်များသည် Dutchtown CID ခြေရာ သို့မဟုတ် စိန့်လူးဝစ် ပင်မလမ်းများ ပစ်မှတ်နေရာကို အာရုံစိုက်မည်ဖြစ်သော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ရပ်ကွက်၏ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ဧရိယာများကို ပစ်မှတ်ထားသည့် ပရောဂျက်များပေါ်တွင်လည်း လုပ်ဆောင်ပါမည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Dutchtown တစ်ဝှမ်းလုံးမှ နေထိုင်သူများနှင့် လုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များကို သင့်စိတ်ဝင်စားမှုများနှင့်ကိုက်ညီသော ကော်မတီတစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော ကော်မတီများတွင် ပါဝင်ရန် ကျွန်ုပ်တို့ တိုက်တွန်းပါသည်။
သင် sign up လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်သင်လုပ်နိုင်ပါတယ် အဆိုပါ signup ပုံစံကိုဖြောင့်ခုန်.
ကော်မတီများအားလုံးသည် Microsoft Teams မှတစ်ဆင့်သို့မဟုတ်ညနေ ၆ နာရီတွင် ၃၂၀၇ Meramec ၌ NICstl ၌တွေ့ဆုံကြသည်။ သငျသညျအောကျတှငျ, ဒါမှမဟုတ်ပေါ်တွင်အစည်းအဝေးရက်စွဲများရှာတွေ့နိုင်ပါသည် Dutchtown ပြက္ခဒိန်.
ဒီဇိုင်းကော်မတီသည်ရပ်ရွာ၏စစ်မှန်သောစရိုက်နှင့်အာကာသအာရုံကိုထိန်းသိမ်းနေစဉ်ရပ်ကွက်၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစိတ်အပိုင်းများကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်သည်။ ဒီဇိုင်းကော်မတီသည်အနုပညာ၊ ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှု၊ အလှအပနှင့်လုံခြုံမှုတို့ပါ ၀ င်သောစီမံကိန်းများကိုလုပ်ဆောင်သည်။ ဒီဇိုင်းကော်မတီ၏စီမံကိန်းနှင့်လုပ်ငန်းအများစုကိုဆပ်ကော်မတီများမှတစ်ဆင့်ပြုလုပ်သည် -ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကိုဆက်သွယ်ပါ ဘယ်လိုပါဝင်ရမယ်ဆိုတာသိဖို့။
Economic Vitality Committee သည် Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်း၊ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များကိုအားပေးခြင်းနှင့်သင့်လျော်သောဖွံ့ဖြိုးမှုကိုရှာဖွေခြင်းအားဖြင့်ဒေသတွင်းစီးပွားရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးကွဲပြားစေပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် Dutchtown သို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ကြဉ်းရန်အတွက်လက်ရှိနှင့်အလားအလာရှိသောစီးပွားရေးပိုင်ရှင်များ၊ လူနေအိမ်နှင့်စီးပွားဖြစ်အိမ်ခြံမြေပိုင်ရှင်များ၊ အခြားပါတီများနှင့်အတူလုပ်ကိုင်ပါမည်။
လတိုင်း၏ဒုတိယအင်္ဂါနေ့ညနေ ၆း၀၀ တွင်တွေ့ဆုံသည်။
အရောင်းမြှင့်တင်ရေးကော်မတီသည် Dutchtown ၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးဌာနဖြစ်သည်။ လှုပ်ရှားမှု၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ စီးပွားရေးနှင့်လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအကြောင်း၊ Dutchtown ၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစျေးကွက်နှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်အတွက်အပြုသဘောဆောင်သောပုံရိပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပွဲများကိုစီစဉ်သည်၊ ဒေသတွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတိုးမြှင့်သည်။
လတစ်လ၏ဒုတိယကြာသပတေးနေ့ည ၆း၀၀ နာရီတွင်တွေ့ဆုံသည်။
အဖွဲ့အစည်းကော်မတီ၏ရည်မှန်းချက်မှာလူထုအားအတူတကွစုစည်းရန်၊ အများသဘောဆန္ဒနှင့်ဘုံမျှော်မှန်းချက်တည်ဆောက်ရန်၊ အရင်းအမြစ်များကိုစုစည်းရန်နှင့်ပြန်လည်ရှင်သန်ရေးကို ဦး တည်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကော်မတီသည်စေတနာ့ ၀ န်ထမ်း၊ ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးနှင့်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ယက်များကိုအမှုအရာများဖြစ်လာစေရန်စည်းလုံးစေသည်။
လတစ်လ၏တတိယမြောက်အင်္ဂါနေ့ညနေ ၆ နာရီတွင်တွေ့ဆုံသည်။
Dutchtown ကော်မတီများသည် Dutchtown Main Streets နှင့် Dutchtown CID ၏ဘုတ်အဖွဲ့များသို့ အစီရင်ခံပါသည်။ ဘုတ်အဖွဲ့များသည် ရပ်ရွာအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ပါဝင်ပတ်သက်သူများ၏ သဘောထားကို ရယူကြပြီး ပါဝင်လိုသူ မည်သူမဆို ကော်မတီတွင် ပါဝင်နိုင်ပါသည်။
ပုံစံ စီးပွားရေးအရေးပါမှု အဖှဲ့အစညျး ရာထူးတိုးမြှင့်ပေးခြင်း သင်မည်သည့်ကော်မတီများကိုစိတ်ဝင်စားသည်ကိုစစ်ဆေးပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာပို့စာရင်းအတွက် sign up? Yes အဘယ်သူမျှမ လစဉ်လတိုင်းအီးမေးလ်အနည်းငယ်ပို့သည်။
ဤပုံစံသည် spam များကိုကာကွယ်ရန် Google reCaptcha v3 ကိုအသုံးပြုသည်။ (ကြည့်ပါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ နှင့် ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ)
ဒီစာမျက်နှာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် ဇန်နဝါရီလ 7th, 2022 .
ဒိန်းမတ် Dutchtown ကော်မတီများ